पक्राउ पर्ने डरले १८ पाइलटले जागिर छाडे » खबरहरुको एउटै केन्द्र
मंगलवार, असार ७, २०७३ ११:४२ मा प्रकाशित !
एक नक्कली पाइलटलाई पक्राउ गर्दै प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रको छानबिन अगाडि बढाएपछि विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीमा कार्यरत पाइलटले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्। दुई महिनामा २२ जनाले राजीनामा दिएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गोमा एयरका को-पाइलट विशाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो। आइएस्सी फेल भएपछि उनले अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आइएस्सी पास गरेको नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर पाइलट पढेका थिए।
अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिसकेको छ। कार्की पक्राउ परेपछि पाइलटहरुले राजीनामा दिन थालेको सीआईबीका निर्देशक डीआईजी नवराज सिलवालले बताए।
हालसम्म सीआईबीले करिब एक हजार पाँच सय चिकित्सकको शैक्षिक प्रमाणपत्र आधिकारीकता जाँच गरेकोमा करिब एक सय ५० जनाको आइएस्सीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टी भइसकेको छ।
जसमध्ये ५३ जना पक्राउ परिसकेका छन्। शुक्रवारमात्रै सीआइबीले ३६ जनालाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दामा कारबाही अघि बढाएको छ।
PREVIOUS POST Previous post: एमाओवादी बैठकमा अाफ्ना मन्त्रीकाे अालाेचना
NEXT POST Next post: माओवादी युवा सिंहदरवार प्रवेश
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, असार ७, २०७३ ११:४२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, असार ७, २०७३ ११:४२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, असार ७, २०७३ ११:४२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, असार ७, २०७३ ११:४२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, असार ७, २०७३ ११:४२